Löfven oo dhacdadii New Zealand ku sifeeyay karah – Banaadir weyne
Löfven oo dhacdadii New Zealand ku sifeeyay karah
Löfven oo shir jaraa’id kaga faallooday dhacdadii New Zealand. sawir: Stina Stjernkvist/TT
Madax dawladda Sweden Stefan Löfven ayaa ka faallooday falkii argagixsnimo ee ka dhacay dalka New Zealand, halkaasina oo ey ku naf waayeen 49 ruux.
Argagixisadii ka dhacday jimcadii maanta ka dhacday Christchurch, ee dalka New Zealand ayuu shir jaraa’id maanta ka qabtay madaxa dawladda Sweden, isagoona sheegay inuu ahaa fal loo baahan yahay in si wada jir ah looga hor tago:.
– Noocayada falalkan oo dhami waxey halis ku yihiin nidaamkayaga dimoqoraadiga. Waana mid loo baahan yahay in loo istaago, si bulshada sida ugu suurtagal badan ey u helaan ammaan. Waa midda u muhiimsan inay bulshadu dareento in howlaahaa faraha lagula jiro maanta, sida uu sheegay.
-Waxaa sidoo kale muhiim ah in bulshadu aanay nolosheeda waxba ka bedelin, waa midda ay dooneyaan cabsi gelinta. Midda ey dooneyaan argagixisadu waxay tahay dhan iney dadka iska hor keento oo uu ka dhasho jahwareer iyo carqaladin. Waana midda cabsida gelinaysa, midda ey dooneyaan.
Sweden waxay diyaar u tahay inay gacan u fidiso dalka New Zealand, haddii uu dalkaasi nooga baahdo, sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa isa soo taraya warbixinnada sheegaya in shakhsiga lagu tuhunsan yahay inuu falkaa ka dambeeyay uu shaashaddaha bulshada soo dhigay qoraal sheegaya inuu falkii maanta ka dhacay Christchurch ahaa mid looga fal celinayay falkii argagixiso ee ka dhacay waddada Drottninggatan ee magaalada Stockholm, sannadkii 2017.
Stefan Löfven ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo sababta falkaa lagu macneeyay in cidda ka dambeysay ay u gashay. Hase yeeshee sheegay inuu mid u dhigma ka dhacay dalka Sweden.
– Waxaa weli naga muuqda daqarradii Drottninggatan, sida uu sheegay Löfven.
– Radio Sweden Somali